ချစ်ခြင်း၏ ကဗျာဆန်သော ဖွင့်ဆိုမှုအား သိပ္ပံပညာရှင်များချိုးဖျက် | စွန်းထင်ခဲ့သော မင်စက်များ
ချစ်ခြင်း၏ ကဗျာဆန်သော ဖွင့်ဆိုမှုအား သိပ္ပံပညာရှင်များချိုးဖျက်
မင်းကို ဗဟုသုတရစရာ အကြောင်းတစ်ခု ပြောပြချင်တယ်။ Eleven Media က ထုတ်တဲ့
ဂျာနယ်ထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ဟာပါ။ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်ကွာ။
အချစ်သည် နှလုံးသားမှ ပေါက်ဖွားလာသည် ဆိုသည်မှာ မဟုတ်မှန်ဘဲ ဦးနှောက်မှသာ
အချစ်သည် နှလုံးသားမှ ပေါက်ဖွားလာခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဦးနှောက်တွင်း၌သာ
ပေါက်ဖွားခံစားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဦးနှောက်အတွင်း၌ အချစ်ကိုခံစားနိုင်သော
ဧရိယာပတ်လမ်းကြောင်းများရှိကြောင်း နယူးယောက်မှ အာရုံကြောဗေဒပညာရှင်များက
ချစ်ခြင်းအား သိပ္ပံနည်းကျ ကဗျာမဆန်စွာ ဖွင့်ဆိုမှုအရ အချစ်ကို
ဦးနှောက်တွင်းရှိ ပုံရိပ်များ၊ ဟော်မုန်းများ၊ မျိုးဗီဇ သဘောတရားများ
အချစ်သစ်ကို ခံစားခြင်း၊ ခိုင်မြဲသောချစ်ခြင်း၊ အသဲကွဲခြင်းတို့နှင့်
ဖြစ်ပျက်မှုကို လေ့လာနိုင်ခဲ့သည်။ ချစ်ခြင်းခံစားမှု
ဧရိယာလေးခု ဦးနှောက်အတွင်းတွင်ရှိကြောင်း တွေ့  ရှိခဲ့သည်။
tegmental area (VTA)ဟုခေါ်ဝေါ်ပြီး ချစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ခံစားစဉ်
ယင်းဧရိယာအတွင်း လှုပ်ရှားမှုများကို လေ့လာခဲ့သည်။ အချစ်ကိုခံစားကာစ လူများကို
၄င်းကို ချစ်ခင်သည့် သူ၏ပုံကို ပြသ၍ သံလိုက်စက်ကွင်းပုံဖော်ကိရိယာဖြင့်
စစ်ဆေးသော အခါ ယင်းဧရိယာ အတွင်း၌ ထွန်းလင်းလှုပ်ရှားမှုကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
နှစ်၂၀ ကြာချစ်ခင်မှု မပျက်သေးသည့်သူများကိုလည်း ယင်းအတိုင်းစမ်းသပ်ခဲ့ရာ
လှုပ်ရှားထွန်းလင်းမှုကို တွေ့ခဲ့ကြရသည်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှု နယ်ပယ်တစ်ခုမှာ
မပြည့်စုံသေးသော်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောနိုင်သည်မှာ ချစ်ခြင်းသည်
ဦးနှောက်အတွင်း၌ ဓာတုဗေဒနည်းကျ ဆေးသုံးစွဲသလို စွဲလမ်းတတ်သည့်
“ရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့ အချစ်ဆိုတာ ဆေးစွဲသလိုပါပဲ။ ကောင်းရင်တော့ တကယ့်ကို
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ စွဲလမ်းမှုမျိုးဖြစ်လာသလို အခြေအနေဆိုးရင်လည်း
တကယ့်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ စွဲလမ်းမှုမျိုး ဖြစ်လာပါတယ်” ဟု
သုတေသနတွင်ပါဝင်ခဲ့သည့် ရုဂျာတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခဟယ်လင်ဖစ်ရှာက ဆိုပါတယ်။
အသည်းကွဲသူများနှင့်ပတ်သက်၍ လေ့လာရာတွင်လည်း ယင်းအတွက်ခံစားနေရသည့်
ဦးနှောက်အတွင်း၌ ဆေစွဲသူများ ဆေးကို တောင်းတသောကြောင့်
ဦးနှောက်အတွင်းဖြစ်ပေါ်သည့် လှုပ်ရှားမှုမျိုးနှင့် တူသော အခြေအနေမျိုးကို
“အသည်းကွဲတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေမှာကြတော့ တစ်စုံတစ်ရာကို ပြင်းပြင်းပြပြ တောင့်တတဲ့
ဆန္ဒဆိုတာမျိုးနဲ့ တူတဲ့ ကိုကင်းဆွဲတဲ့ သူတွေ တောင့်တမှုမျိုးနဲ့တူတဲ့
အနေအထားမျိုး ဦးနှောက်မှာဖြစ်တာကို တွေ့ ခဲ့ ရပါတယ်” ဟု နယူယောက်၊
အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်းဆေးကောလိပ်မှ အာရုံကြောဗေဒပညာရှင် လူစီဘရောင်းက ဆိုသည်။
နယူးယောက်ရှိ တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံမှ ပညာရှင်များ ပါဝင်သော အဖွဲ့သည် နှစ်၂၀နှင့်
အထက် ကွဲကွာခြင်းမရှိဘဲ အတူတကွ နေလာကြသော စုံတွဲများ၊ ကြင်စဦး
ဖြစ်သည်။ နှစ်၂၀ နှင့် အထက်လက်တွဲခဲ့ သူများ၌မူ ချစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော
ခံစားမှုပေါ်လာပါက ဦးနှောက်အတွင်းရှိ VTA ဧရိယာအတွင်း ထွန်းလင်းမှုအပြင် Ventral
pallidum နှင့် Raphe nucleus ဟုခေါ်သည့် ဧရိယာနှစ်ခုအတွင်း၌ပါ ထွန်းလင်းမှုကို
တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယင်းဧရိယာများသည် စိတ်ဖိစီးမှုကို ပြေလျော့စေပြီး စိတ်ကို
တည်ငြိမ်စေသော ဟော်မုန်းများထွက်ရှိသည့် နေရာလည်းဖြစ်ကာ အနိမ့်စား
ပျော်ရွှင်မှုကိုပါ ပေးစွမ်းနိုင်သည်ဟု တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ယခုတွေ့ရှိမှုကြောင့်
ဦးနှောက်အတွင်းရှိ အချစ်ခံစားမှု ပတ်လမ်းလှုပ်ရှားမှုများ ဆက်ရှိနေရေးအတွက်
နည်းနာများကိုပါ ပိုမိုသိနားလည်ရကြောင်း ပညာရှင်များက ပြောသည်။
သုတေသနတွင်ပါဝင်ခဲ့သည့် အတ္တလန္တရှိ အီမိုရီတက္ကသိုလ်၊ ယာကီးစ်အမျိုးသား
ပရိုင်းမိတ်သုတေသနဌာနမှ လယ်ရီယန်းက “ဒီဆက်ဆံရေးဒီဖြစ်စဉ်ကို ရချင်ရင်
လှုံဆော်တဲ့ မော်လီကျူးတွေထုတ်ပေးတဲ့ အပြုအမူမျိုးတွေ လိုမှာပါ”ဟု သုံးသပ်သည်။
“ကျွန်တော့မိန်းမက ပြောတာတော့ ပန်းပေးတာလည်း အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပဲ။
သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက် အနေနဲ့တော့ ပြောရခတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကလည်း သက်ရောက်မှု
ရှိကောင်းရှိမှာ ပေါ့လေ” ဟု ယန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
This entry was posted on Monday, October 12th, 2009 at 2:27 pm	and posted in အချစ်.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
One response to “ချစ်ခြင်း၏ ကဗျာဆန်သော ဖွင့်ဆိုမှုအား သိပ္ပံပညာရှင်များချိုးဖျက်”
အဲဒါဆိုရင် အချစ်ကဘာလဲဗျာ တကယ်မသိတော့ဘူး ကူညီကြပါဦး ရူးတော့မယ် လူတစ်ယောက်ကို အချိန်တိုင်းနီးပါးသတိရနေတာဟာ အချစ်လား မဟုတ်လောက်ဘူးနော် အဲဒါ သတိရတာပဲဖြစ်မယ် မေ့လို့ ရတယ် ဆိုတာတွေရှိတယ် မေ့ရမှတော့ အဲ့ဒါအချစ်မဟုတ်လောက်ဘူး ပြီးတော့ မိဘ တွေကို ကြောက်လို့ မချစ်ရဲတာဆိုတာကော ဖြစ်နိုင်လား